Khabib Nurmagomedov oo jawaab kulu ka bixiyey gefkii Macron ee Nebiga NNKH | Warkii.com
Home warkii Khabib Nurmagomedov oo jawaab kulu ka bixiyey gefkii Macron ee Nebiga NNKH
Khabib Nurmagomedov oo jawaab kulu ka bixiyey gefkii Macron ee Nebiga NNKH
Feeryahanka dhowaan howlgabka noqday ee reer Russia Khabib Nurmagomedov ayaa si kulul Jimcihii u cambaareeyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ay kasoo yeereen hadallo gef ku ah islaamka.
“Allah qaadirka ah wejigiisa ha beddelo aadanahan (Macron) iyo dhammaan inta raacsan, kuwaasi oo ayaga oo qiil ka dhiganaya xoriyadda hadalka, u gefay dareenka in ka badan hal bilyan iyo bar Muslimiin ah,” ayuu Khabib ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Instagram.
32 jirkan ayaa sheegay in Muslimiinta ay Nebi Muxamed u jecel yihiin si ka badan qof kasta, oo ay ku jiraan hooyooyinkooda, aabayaashood iyo xaasaskooda.
“I aamina, daan-daansigan waa uu kusoo noqon doonaa,” ayuu yiri Khabib
Khabiib ayaa sidoo kale soo dhigay bartiisa Instagram aayadda 57-aad ee suurta Al-Axzaab ee oraneysa:
“Kuwa dhiba Allah iyo Rasuulkiisa, Allah ayaa lacnaday (naxariistiisa ka dheereeyey) adduunyada dhexdeeda iyo aakhiro, Allaha ayaana wuxuu u diyaariyey cadaab dulleeya.”
Qoraalka Khabiib Nurmagomedov ayaa waxaa sidoo kale raacsanaa sawirka Macron oo wejiga kab laga saaray.
Macron ayaa maanta sheegay inuu fahamsan yahay dareenka ay Muslimiinta ka qabaan sawir gacmeedyada lagu aflagaadeynayo Nebi Muxamed NNKH, wuxuuna carabka ku dhejiyey in dowladdiisa aysan marnaba taageersaneyn sawirradaas.
Previous articleYaa ugu cad cad qabashada guddoomiyaha baarlamanka HirShabeelle
Next articleMACRON oo ka laabtay taageeradii uu u muujiyey sawir gacmeedyada gefka ku ah Nebi Muxamed NNKH
Ciidamada Kenya oo weerar kale maanta ka fuliyey Gedo …
Ciidamada dalka Kenya ee qeybta ka ah howl-galka AMISOM ee Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in weerar cusub oo duqeyn ah ay ka fuliyeen...
Ciidamada Danab oo howl-gal ku dilay Sheekh Maxamed Gacamey iyo ilaaladiisa